Tahiry isam-bolana Aogositra 2015 1 Lahatsoratra Mey 2015 3 Lahatsoratra
Avrily 2015 1 Lahatsoratra Marsa 2015 1 Lahatsoratra Febroary 2015 1 Lahatsoratra Novambra 2014 1 Lahatsoratra Oktobra 2014 1 Lahatsoratra Aogositra 2014 1 Lahatsoratra Jolay 2014 1 Lahatsoratra Marsa 2014 2 Lahatsoratra
Janoary 2014 1 Lahatsoratra Desambra 2013 1 Lahatsoratra Novambra 2013 1 Lahatsoratra Septambra 2013 1 Lahatsoratra Aogositra 2013 1 Lahatsoratra Avrily 2013 2 Lahatsoratra
Novambra 2012 1 Lahatsoratra Oktobra 2012 1 Lahatsoratra Septambra 2012 1 Lahatsoratra Aogositra 2012 1 Lahatsoratra Jolay 2012 4 Lahatsoratra
Jona 2012 1 Lahatsoratra Mey 2012 1 Lahatsoratra Avrily 2012 2 Lahatsoratra
Desambra 2010 1 Lahatsoratra Septambra 2010 1 Lahatsoratra Jolay 2010 1 Lahatsoratra Jolay 2009 1 Lahatsoratra Mey 2009 1 Lahatsoratra Marsa 2009 1 Lahatsoratra Janoary 2009 1 Lahatsoratra Septambra 2008 1 Lahatsoratra Aogositra 2008 1 Lahatsoratra Jona 2008 2 Lahatsoratra
Desambra 2007 1 Lahatsoratra Novambra 2007 1 Lahatsoratra Oktobra 2007 5 Lahatsoratra
Tantara misongadina mikasika ny Oganda	E-boky GV Vaovao: Feom-Panantenana sy Fiovàna Afrikana "Feom-panantenana sy fiovana Afrikana" mampanakaiky anao kokoa amin'ireo tantara sy vahoakan'i Afrika atsimon'i Sahara, amin'ny alalan'ireo lahatsoratra tsara indrindra amin'ny teny anglisy nandritra ny taona 2012 - kadoa lavorary entina hiarahabana ny taona vaovao.
01 Avrily 2013 Ireo Fototry Ny Olana Ankehitriny Ao Amin'ny Repoblikan'i Centrafrique Mpanoratra Anna Gueye · Frantsa 15 Janoary 2013 Oganda: Manoloana Ireo Sakana, Tontosa Ihany Ilay Gay Pride Voalohany Natao Tany Entebbe Mpanoratra James Propa · Mediam-bahoaka 02 Janoary 2013 E-boky GV Vaovao: Feom-Panantenana sy Fiovàna Afrikana Mpanoratra Bernardo Parrella · Angola Tantara Malaza Indrindra Manerantany 4 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
Tantara mikasika ny Oganda 30 Aogositra 2015
Taorian'ny Fisamborana Ireo Tanora Mafàna Fo, Miteny Manohitra Ny Tsimatimanotan'ny Mpitandro Filaminana Ny Ogandey Mpanoratra Prudence Nyamishana · Fifidianana "Nietry ho vondron'olom-bitsy mitam-piadiana izay miady amin'ny mpanohitra ara-pôlitika sady miasa tapak'andro amin'ny fampanarahan-dalàna ny mpitandro filaminana ao Oganda"
Toy Izao No Mitranga Rehefa Nisy Nilaza Hoe Niteny Ny Mozisiana Iray Fa Ambany Noho Ny Vehivavy Fotsy Ireo Ogande Mpanoratra James Propa · Foko sy Fiaviana Tao anatin'ny tafatafany ho an'ny gazety New Vision ao Ogandadia hoy i CocoFinger,Ogande mpangaly mozika, hoe : "tsy fifandraisana matotra fa resaka firaisana ara-nofo fotsiny no mety hifanaovako fotoana aminà sipa Ogande".
Oganda: Ben'ny Tanàna Manana Karapanondrom-Pirenena Roa. Tsy Fambara Tsara Ho An'ny Fifidianana Izany Mpanoratra James Propa · Fifidianana Ho ampiasaina amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 2016 ireo karapanondro nozaraina. Nilaza ny ben'ny tanàna fa afakanahazo karatra roa samihafa izy.
Ongandey Iray Mandefa Sioka Manohitra Ny Filoha Museveni Sy Ny Hetsi-Pirenena Fijoroana Mpanoratra Prudence Nyamishana · Fahalalahàna miteny Raha karamaina hivarotra "fihatsarambelatsihy manafintohina" aho, ity kaonty @KagutaMuseveni (kaonty twitter ofisialin'ny filohan'i Oganda) ity no mety ho lasibatry ny fampiasam-bola amin'izany.
Ry CNN, Tsy Tanzania i Ogandà Mpanoratra Prudence Nyamishana · Media sy Fanoratan-gazety "Indraindray toa ny CNN no Panafrikanista hiringiriny sisa tavela. Tsy mino izy ireo fa misy dikany ny sisintanim-pirenena na ny anaram-pirenena!"
Te-Hanolo Ireo Mpanoratra Gazety Ao Amin'ny Parlemanta Ireo Mpanao Lalàna Ogandey Mpanoratra Prudence Nyamishana · Media sy Fanoratan-gazety Mieritreritra volavolan-dalàna hanolo ireo mpanoratra gazety rehetra nitatitra ny raharaha parlemantera talohan'ny 1 Mey 2010 ireo mpanao lalàna Ogandey "mba ho tombotsoan'ny fifandanjan'ny fitateram-baovao" .
‘Sakafo iainako Ny Photoblogging’, Hoy i Edward Echwalu, ilay Ogande Mpakasary Mpanoratra Prudence Nyamishana · Mediam-bahoaka "Indraindray mahakivy antsika ny zavatra tsy dia misy dikany. Aza ampirimina ny fitaovanao; misy olona any miandry ny avy any an'eritreritrao. Tohizo hatrany."
Nanangana Hetsika Diezy Twitter Hanoherana Ny Orinasam-pifandraisana Goavana Iray Ny Ogandey Mpanoratra Prudence Nyamishana · Hafanàm-po nomerika Nimenomenona nandritra ny taona maro noho ny tolotra mahatsiravina omen'ny MTN an'ireo mpanjifany ny Ogandey, ka nanapa-kevitra hanambatra ny heriny ireo Ogandey ary nanangana ny hetsika diezy Twitter manohitra ny MTN.
‘Nofinofy Kely Ho Lasa Fiovàna’, Hetsika Tsara Indrindran'ny Media Sosialy Any Oganda Mpanoratra Tumusiime Patrick · Hafanàm-po nomerika Nitafatafa tamin'i Esther Kalenzi, mpamorona ny 40 Days Over 40 Smiles i Tumusiime Patrick momba ny asa soa ataony, izay manampy ireo ankizy sy vondron'olona marefo mba hahazo fampianarana an-tsekoly sy fampianarana mikasika ny fiainana.
Pitsopitsony Ara-Teknika No Nentin'ny Fitsarana Ao Oganda Nanafoanana Ny Lalàna Mandrara Ny Fiarahan'ny Lahy Samy Lahy Ary Ny Vavy Samy Vavy. Mpanoratra James Propa · Lalàna Nihoby ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana ny vondrom-piarahamonin’ny LGBT, tamin’ny alalàn’ny mediam-bahoaka, na mbola mijanona ho heloka ihany aza ny fiarahan’ny lahy samy lahy ary ny vavy samy vavy any Oganda.
Tselatra mikasika ny Oganda
10 Marsa 2014Ady & FifandiranaTsingerintaona Faharoan'ny Fanentanana Kony 2012
07 Aogositra 2008Tontolo_iainanaTontolo iainana: Ny fitrandrahana solika
11 Jona 2008Fahalalahàna mitenyOganda : Famoretana ny fanaovan-gazety
25 Mey 2008FivavahanaAfrika: Ny fanamby miandry ny fivavahana any Afrika Atsinanana
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Oganda »Araho Twitter